Cristiano Ronaldo oo doonaya in loo dhalo Lambarka uu wato oo CARUUR AH!!!!!!!! – Gool FM
Byare July 27, 2017
(Europe) 27 Luulyo 2017. Cristiano Ronaldo ayaa daaha ka rogay inuu doonayo inuu caruurtiisa gaarsiyo ilaa todoba cunug si ay u bar-bareeyaan Lambarka uu ku caan baxay ee CR7.
Xiddiga Real Madrid ayaa durba iminka heysta saddex caruur ah, Cristiano Jr oo todobo jir ah iyo labada mataano ee dhawaan loo dhalay Eva iyo Mateo, iyadoo mid kale la sheegay inuu jidka ku soo jiro kaddib markii ay saxaafada Spain sheegeen inuu Ronaldo xaqiijiyay horaantii bishan inay uur u leedahay saaxiibadiisa cusub ee Georgina Rodriguez.
Ronaldo Yare ayaa doonaya inuu helo gabdho iyo wiilal badan uu walaashado Ronaldo ayaana la sheegayaa inuu sheekadan qiray mar uu wareysi siinayay TV laga leeyahay dalka Shiinaha isla markaana ay soo xigatay jariiradda daily Correio da Manha ee ka soo baxda Spain.
“Cristianinho aad ayuu u faraxsan yahay.
“Aad buu u wacan yahay wuxuuna sheegay inuu doonayo wiilal iyo gabdho badan uu walaashado, wuxuu doonayaa ilaa 7, lambarka mucjisada ah, waxayna ila tahay wax wanaagsan.”.
GOOGOOSKA & SAWIRRADA: Inter Milan oo bur-bursatay Bayern Munich….(Eder oo labo madax ka xareeyay)